13 Mhando dzeakakonzera Email Campaign Iwe yaunofanirwa Kuita | Martech Zone
13 Mhando dzeakakonzera Email Campaign Iwe yaunofanirwa Kuita
Chipiri, Gunyana 19, 2021 Chitatu, October 20, 2021 Douglas Karr
Mukushanda nevatengesi vanoverengeka veemail, ini ndagara ndichishamisika nekushayikwa kwezvakagadzirwa, zvinoshanda zvakakonzera mishandirapamwe yeemail mukati meakaundi pakuitwa. Kana iwe uri chikuva kuverenga izvi - iwe unofanirwa kunge uine aya macampaign akagadzirira kuenda mune yako system. Kana iwe uri mushambadzi weemail, unofanirwa kunge uchishanda kubatanidza akawanda marudzi eemail akakonzeresa sezvaunokwanisa kuti uwedzere kubatikana, kutora, kuchengetedza, uye upsell mikana.
Vashambadziri vasiri kushandisa yakakonzeresa email mishandirapamwe pari zvino vari kurasikirwa zvakanyanya. Kunyange maemail akakonzeresa ari kukura mukutorwa, ruzhinji rwevatengesi havasi kutora mukana weiyi nzira iri nyore.
Ndeapi Akakonzerwa maemail?
Maimeri akakwenenzverwa ndeemaemail anotangwa kubva kune anoteedzera maitiro, chimiro, kana zvido. Izvi zvinopesana neyakajairika, mishambadziro yekutumira mameseji inoitwa pazuva rakatemwa kana nguva nechiratidzo.
Nekuti zvakakonzera email mishandirapamwe inoenderana nehunhu uye yakatarwa nguva kana munhu anenge achinyoresa achivatarisira, vanowana mhedzisiro yepamusoro kana vachienzaniswa nebhizimusi senguva dzose mishandirapamwe yeemail senge matsamba etsamba. Maererano ne Blueshift Benchmark Mishumo paTriggered Email Kushambadzira:
Paavhareji, maemail akakonzerwa ari 497% inoshanda kupfuura kuputika maemail. Izvi zvinotyairwa ne 468% yakakwira yekudzvanya chiyero, uye a 525% yakakwira kutendeuka mwero.
Paavhareji, eemail mishandirapamwe uchishandisa kusangana nguva yekugadzirisa ari 157% inoshanda zvakanyanya kupfuura isiri-yekuita nguva yakagadziriswa maemail. Izvi zvinotyairwa ne 81% yakakwira yekudzvanya chiyero, uye a 234% yakakwira kutendeuka mwero.
Paavhareji, e-mail mishandirapamwe uchishandisa kurudziro ndeye 116% inoshanda kupfuura batch mushandirapamwe pasina kurudziro. Izvi zvinotyairwa ne 22% yakakwira yekudzvanya chiyero, uye a 209% yakakwira kutendeuka mwero.
Blueshift yakaongorora mamirioni mabhirioni e14.9 paemail uye nhare dzekusundidzira dzinotumirwa nevatengi veBlueshift. Vakaongorora iyi data kuitira kuti vanzwisise misiyano yemakirisito ekubatana epakati kusanganisira madhivhiti mareti uye mitengo yekutendeuka pakati pemhando dzakasiyana dzekutaurirana. Dhechi yavo yekumiririra inomiririra anopfuura gumi nemaviri maindasitiri akatwasuka anosanganisira eCommerce, Consumer Finance, Healthcare, Media, Dzidzo, nezvimwe.
Iwo mapamhi akapamhama eakakonzera eemail mishandirapamwe anowira pasi pehupenyu, kutengeserana, kushambadzira, hupenyu hwevatengi, uye chaicho-nguva chinokonzeresa. Kunyanya zvakanyanya, zvakakonzera makwikwi eemail anosanganisira:
Welcome Email - Ino ndiyo nguva yekumisikidza hukama, uye nekupa nhungamiro yehunhu iwe hwaunoda kuseta.
Onboarding Emails - Dzimwe nguva vanyoreri vako vanoda a kusunda kuvabatsira kumisikidza account yavo kana kutanga kushandisa chikuva chako kana chitoro.
Kutanga Kuita - Vanyoreri vakamisikidza asi vasina kuita pakarepo vanogona kunyengerwa kuti vaite izvi nemaemail aya.
Reactivation Email - Re-ita vanyori vasina kupindura kana kudzvanya kuburikidza mukati mekutenga kwako kutenderera.
Kutangazve Email - Vakasiya marasha ekutsvaga ngoro vanoenderera mberi nekufambisa shanduko zhinji dzevatengesi veemail, kunyanya mue-commerce nzvimbo.
Transactionional Email - Masevhisi ebasa ndiwo mikana mikuru yekudzidzisa yako tarisiro uye vatengi pamwe nekuvapa imwe nzira yekubatana. Inosanganisirwa e-risiti, zvivimbiso zvekutenga, odha dzekumashure, odhi yekusimbisa, kutumira kwekusimbisa uye kudzoka kana kudzoreredza zvinoita maemail.
Kudzorerazve Email -Kutumira chiziviso kumutengi kana hesiti yadzoka mustock inzira yakanaka yekukura shanduko uye kudzoreredza mutengi panzvimbo yako.
Account Email - Ziviso kune vatengi veshanduko kuaccount yavo, sekuvandudzwa kwepassword, shanduko kuemail, shanduko yemaficha, nezvimwe.
Yemunhu Chiitiko Email -Bhavhadhe, zuva rekuzvarwa, uye zvimwe zviitiko zvepamusoro zvinogona kupa zvipo zvakakosha kana kubatanidzwa.
Maitiro Eemail -Kana mutengi achibata panyama kana dijitari nemhando yako, kutsvedza yakasarudzika uye yakakodzera email meseji inogona kubatsira kukurumidza rwendo rwekutenga. Semuenzaniso, kana mutengi achivhura saiti yako uye akasiya… unogona kuda kupa email yekukurudzira chigadzirwa iyo inopa kupihwa kana ruzivo rwekuwedzera unovanyengedza kuti vadzoke.
Email Inokosha - Makorokoto mameseji evanyoreri asvika pane yakatarwa nhanho nechiratidzo chako.
Chaiyo-nguva Vanokanganisa - Mamiriro ekunze, nzvimbo, uye zviitiko-zvinokonzeresa kuti uite zvakadzama netarisiro yako kana vatengi.
Ongororo Email - Mushure mekuraira kana chirongwa chapera, kutumira email kubvunza kuti kambani yako yaita sei nzira huru yekuunganidza inoshamisa mhinduro pane zvigadzirwa zvako, masevhisi, uye maitiro. Izvi zvinogona zvakare kuteverwa neemail yekudzokorora kwaunokumbira kuongororwa kubva kune vatengi vako kuti vagovane pane dhairekitori uye nzvimbo dzekuongorora.
Chidzidzo chinosimbisa vashambadziri kuti vabatsirwe nekushandisa yakafara uye yakawanda yakasanganiswa mishandirapamwe iyo inokweva pamubatanidzwa wezvinokonzeresa kuti zvive nani kuita uye kushandura vatengi. Vatengesi vanogona kuzviwana vachiongorora zvavo nzira dzekukwidza mushandirapamwe munguva yekudzokera-kuchikoro yekutengesa uye pamberi pemwaka wekutenga wezororo.
Wona Blueshift's Trigger-Yakavakirwa Kushambadzira Benchmark Chirevo
Tags: avhareji kukosha kukoshaemail yekudzorera kumashureemail simbisoEmail Marketingzviitikokugadzirisazvekugadzirisazve emailkudzokororakudzokorora emaildzosera email yekudzorerakutumira email yekusimbisamutengapweemail yekutengeseranaTriggerkukonzera zviitikoyakatanga emailzvakakonzera mushandirapamwe weemailzvakakonzera mhando dzeemailMauyawelcome emailehehongu kushambadzira kwehupenyu